Spoiler Leaks တွေကြောင့် ထိခိုက်မှုများ
1.Leakသွားတဲ့အခန်းတွေကို ထုတ်လွှင့်ချိန်မှာ ဖြတ်ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကို ဆက် မရိုက်ဖို့ဖိအားပေးစေနိုင်တယ် သို့ မူလရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံတွေအကုန်ဖျက်သိမ်းခံရသွားစေနိုင်တယ် ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အစီအစဉ်တွေ၊ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်။
2.ဒီလုပ်ရပ်တွေက ဆုတွေကိုပါ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကို Leakတာဟာ ဇာတ်ညွှန်း ခိုးယူကူးချမှုတွေကိုဦးတည်နိုင်တယ်။ဒီလိုလေးနက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့် တစ်ယောက် သို့ တစ်ဆု တောင် nominated မဝင်တာမျိုးထိဖြစ်တတ်တယ်။
3.ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာတောင် ဂုဏ်သတင်းနဲ့အများပြည်သူထင်မြင်ယူဆချက်ကို ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။အချို့သောဖျက်လိုဖျက်ဆီးသမားများသည်အန္တရာယ်ရှိသောပြိုင်ဘက်များမှဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာပြောရရင် Video Clipsတွေကိုတမင်တကာနှေးကွေးစွာလုပ်တယ် ပြီးတော့ အရမ်းဆိုးတဲ့ HD ပုံမျိုးတွေကို ဖြန့်တယ်။ ဒီလိုကြိုတင်ကြံစည်ထားပြီး အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်ကွက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။(တချို့က အမှန်ကိုသေချာမစူးစမ်းဘူး ဒီလိုကြိုတင်မြင်ရတာတွေကြောင့် ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုတဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီး စိတ်ကွက်ကြတာမျိုးကိုပြောတာ။ The untamed မှာ ဥပမာရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ဝမ်းချင်နဲ့ဝေ့ဝူရှန့်ကိုတွဲပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိူးရောက်တဲ့ ရိုက်ကူးရေးclipကိုဖြန့်လို့ ဝမ်းချင်သရုပ်ဆောင်ကိုလူတွေကမုန်းတီးကြပြီး သရုပ်ဆောင်ဟာ ဘယ်Fan meetingမှာ တက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ 😔 The untamed ဟာလည်း Trailer လို့ယူဆရတဲ့ Vid clipပါ leakခဲ့လို့ Trailer တောင်မပြတော့ဘဲ အရဲစွန့်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ကားတိုင်းက The untamed လိုကံမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ )
4.ဒီလုပ်ရပ်တွေက ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ project announcement တွေကိုပျက်ပြားစေပြီးကျော်ကြားမှုရလဒ်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။
5.အနုပညာရှင်ရဲ့ Mainstream ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။တကယ်လို့အနုပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းဒီလိုတွေအလုပ်ခံရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ပြုမှုတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်။တစ်ကြိမ်လောက်သူတို့ကပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီဆိုရင် အနုပညာရှင်တစ်ဦး သည်အလုပ်နှင့်စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုရွေးချယ်ရန်နေရာနည်းလိမ့်မည်။(လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေခိုးရိုက်ခံရတာ အဖြန့်ခံရတာများလာတော့ အလုပ်တွဲလုပ်ရမှာကိုလန့်လာကြတာ။ အဲ့လိုနဲ့အဲ့အနုပညာရှင်ကအလုပ်မရှိတော့ဘဲ Flopရော။ဒါကအဆုံးထိကိုပြောပြတာ)
6.ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ပြည်သူ့သယံဇာတများကိုဖြုန်းတီးပစ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။Spoiler leaksတွေကများသောအားဖြင့်လျှို့ဝှက်စွာဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းကြောင့်ရရှိလာတာပါ။ဒါတွေကတရားမဝင်ပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းလောက်အဖျက်ခံရရင်အဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ငွေကြေးတွေအကုန်ပလုံပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးသာ ဖျက်သိမ်းခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ဆုံးရှုံးမလဲဆိုတာတွေးသာကြည့်တော့။
ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီး Officialမဟုတ်ဘဲ ရှောင်းကျန့်ကလက်ရှိဘာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံတွေ leakလာတာမျိုး စသဖြင့်တွေ့ရင် ပြန်မတင်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါ။ Officials News တွေကိုစောင့်ပေးပြီး ဒီတိုင်းငြိမ်နေပေးခြင်းကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ စာအရှည်ကြီးဖတ်ပေးတဲ့တစ်ယောက်ချင်းဆီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူနဲ့ အခြားဧရိယာတွေမှာ ရေပေးဝေရေး ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပွား
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရေပေးဝေမှု ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့် သုံးစွဲရေ ပြတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကွာလာလ
Posted in Editor Choice, Other contest on Sep 11, 2020.
ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာ Brand New ကားတစ်စီး Surprise လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး
ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာ Brand New ကားတစ်စီး Surprise လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ
Posted in Editor Choice on Sep 11, 2020.
အိန္ဒိယက မတ်ပဲ တန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲ တိုးမြှင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုခငြ်းကြောင့် ပညြ်တွင်းမတ်ပဲစျေး တစ်တန်လျှင် ကျပ်တစ်သိန်းကျော် ခုန်တက်ခဲ့ပြီး မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်အထိ ရှိလာ
အိန္ဒိယက မတ်ပဲတန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲ တိုးမြှင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ခငြ်းကြောင့် ပညြ်တွင်းမတ်ပဲစျေး ... Read more!
Posted in economic, Editor Choice on Sep 11, 2020.